Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang & Henrikh Mkhitaryan Oo Sabab U Noqon Kara In Uu Aaron Ramsey Si Xor Ah Uga Tago Arsenal | Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang & Henrikh Mkhitaryan Oo Sabab U Noqon Kara In Uu Aaron Ramsey Si Xor Ah Uga Tago Arsenal | Hal Sheegaha La Hubo
Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang & Henrikh Mkhitaryan Oo Sabab U Noqon Kara In Uu Aaron Ramsey Si Xor Ah Uga Tago Arsenal
Naadiga Arsenal ayaa u dhaqaaqday in ay heshiis cusub ka saxiixato xiddiga khadka dhexe ee Aaron Ramsey laakiin waxa ay ka cabi qabtaa in ay dhibaato kala kulanto heshiiskiisa cusub sida ay sheegayaan wararku.
Xiddiga khadka dhexe oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kulankii Everton ee Sabtidii ayaa ku jira 18-kiisii bilood ee ugu dambeeyay ee heshiiska Arsenal.
Si kasta ha ahaatee United ayaa ka cabsi qabta in ay heshiis cusub ka saxiixan kari waydo xiddiga kadib markii ay Mesut Ozil ku abaalmarisay heshiis cusub oo uu ku qaadan doono mushahar waali ah.
Gunners ayaa heshiis cusub oo uu todobaadkii ku qaadan doono lacag dhan 350 kun oo Gini ka saxiixatay Ozil inkasta oo uu Jose Mourinho sheegay in uu doonayo in ay xiddigo badan wadadaas oo kale maraan.
Mushaharka waalida ah ee ay Arsenal u soo bandhigtay xiddiga ayaa meesha ka saaray xiisihii ay Man United iyo Barcelona u qabeen xiddigan kadib markii uu Alexis Sanchez ka tagay kooxda iyaga oo si aad ah ugu baahnaa in ay baanka u jabiyaan Ozil si ay u sii haystaan.
Waxa ay sidoo kale saxiixyo heshiisyo waaweyn ku kacaya January kula soo saxiixdeen xiddigaha Pierre-Emerick Aubameyang Iyo Henrikh Mkhitaryan.
Wenger ayaa si cad u qirtay in uu doonayo in uu sii haysto Ramsey laakiin hadii uu doonayo in uu ka tago Gunners kadib 10 sano oo uu kooxda joogay si uu tartan kale u bilowday haatan ayay tahay fursadiisa ugu fiican.
Ramsey ayaa xiiso ka helaya kooxaha reer Spain gaar ahaan kadib qaab ciyaareedka uu ku qaadanayo kooxda Arsenal iyo xulka qarankiisa wales.
Xiddiga khadka dhexe ayaa 6 gool dhaliyay xilli ciyaareedkan halka uu sidoo kale caawiye ka noqday 6 kale isaga oo ah xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda.